Ciidamada Asluubta Somalia oo maanta xusay sannadguuradii 45-aad iyo madaxweynaha oo ka qeyb galay - Wargeyska Faafiye
Madaxweynaha ayaa hadalkan ka jeediyey munaasabadda xuska sannadguuradii 45aad ee ka soo wareegtey aasaaska Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed oo lagu qabtey Xarunta Taliska Ciidammada Asluubta ee magaalada Muqdisho, isagoo hambalyo ku aaddan xuskaasi u direy madaxda , saraakiisha iyo qeybaha kala duwan ee ciidammadaasi.
“Ciidanka Asluubta waxay qeyb ka yihiin ciidammada qaran ee aan leenahay ee aan ku faanno. Waxay si xilkasnimo ah uga soo baxeen waajibaadkooda, iyagoon helin taageero ku filan oo ay hawshooda ku gutaan. Is-xilqaankooda ayaa keenay in maanta ay halkan ku soo bandhigaan cutubyo si wanaagsan loo tababarey oo diyaar u ah gudashada waajibaadkooda, iyo weliba inay awoodeen inay iibsadaan gawaari cusub oo shaqada ciidammada lagu fuliyo. Waa talaabo ku dayasho mudan oo aan filayo in qeybaha kale ee ciidammada ay ku dayan doonaan”.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsMusharraxiinta buuxiyay shuruudahaShabaab oo inay dishay ciidamo badan sheegaysaSenegal President Abdoulaye Wade Loses Runoff Election, Concedes Defeat750 kun qof oo Xalay ku dukatay Masjidka Nabiga. Scw .Daawo Sawirada'' Dalka India oo kaalinta koowad Caalamka ka gashay Qishka Imtixaanada xarumaha waxrashada